Otu esi achọpụta ụlọ ahịa adịgboroja ma ọ bụ nke wayo | ECommerce ozi ọma
Otu esi achọpụta ụlọ ahịa adịgboroja ma ọ bụ nke wayo
Zụta ihe n'ịntanetị dị mma Ebe ọ bụ na ị gaghị ahapụ ụlọ ma ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla na ọnụahịa mara mma. Mana iji hụ na ahụmịhe ịzụ ahịa gị n'ịntanetị nwere afọ ojuju dịka o kwere mee, ọ dị mkpa ka ị mara otu esi eme ya chọpụta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ọ bụ nke adịgboroja.
1 Lelee URL
2 Lezienụ anya na ahịa
3 Lelee ederede n'okpuru ma chọọ aha ụlọ ọrụ
4 Kedu mgbe e kere ngalaba ahụ
5 Lelee mgbasa ozi mmekọrịta
Maka nke a ị nwere ike iji a ntanetị url online, nke ahụ na-enyocha ma chọpụta ma saịtị ahụ ebe ịchọrọ ịzụta bụ n'ezie mkpokọta obi ọjọọ ma ọ bụ nke aghụghọ. VirusTotal na URLVoid, ha bụ abụọ n'ime ihe ndị a pụrụ ịdabere na nyocha nke ị nwere ike iji.
Lezienụ anya na ahịa
Ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị na ọnụahịa dị oke ala, dị ka 50 ma ọ bụ 60%, ọbụlagodi, ị kwesịrị ịdị na-enyo enyo mgbe niile. Ndị a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ike ịnye ọnụahịa dị ala iji ree ihe ngwa ngwa adịgboroja ma ọ bụ nke na-adịghị adị, tupu a chọpụta ha dị ka aghụghọ site na ngwanrọ nche ma ọ bụ ngwaọrụ.
Lelee ederede n'okpuru ma chọọ aha ụlọ ọrụ
Lọ ahịa dị n'ịntanetị ziri ezi ga-egosipụta aha gị mgbe niile na ụkwụ, yana afọ nke okike na afọ dị ugbu a. Ọ ga-agụnye njikọ na "Banyere" peeji nke, akwụkwọ ikike na usoro nnọchi, amụma nzuzo, usoro na ọnọdụ, maapụ saịtị, kọntaktị, ajụjụ a na-ajụkarị, wdg.
Kedu mgbe e kere ngalaba ahụ
Ọ bụrụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na-egosi nwebisiinka nke na-egosi na e mepụtara ya na 2005, mana mgbe ị na-enyocha ụbọchị okike nke ngalaba ahụ, na-eji ngwaọrụ Whois, achọpụtara na emepụtara ya na 2016 n’ezie, o doro anya na ọ bụ saịtị aghụghọ.
Lelee mgbasa ozi mmekọrịta
Ugbu a, ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ọnụnọ dị oke mkpa na netwọk mmekọrịta. Nke a pụtara na enwere ọtụtụ mmekọrịta n'etiti akara na ndị na-eso ụzọ, yabụ ị nwere ike ịkọ ma ọ bụrụ na ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị a tụkwasịrị obi, site na ilele ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ yana ọkachasị echiche na echiche banyere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nche » Otu esi achọpụta ụlọ ahịa adịgboroja ma ọ bụ nke wayo
Miguel Angel Lozano Baron dijo
Ndewo, achọtara m peeji a na-akpọ excel mobile ltd, ebe ha na-ere ekwentị, akpọtụrụ m site na wathsapp ma nye m akụrụngwa na ọnụ ala dị ala, mana usoro ịkwụ ụgwọ bụ site na Western union na amaghị m ma ọ bụrụ nke ahụ dị mma, n'ihi na dị ka ha si kwuo, ha na-enye m mmesi obi ike na ha bụ ụlọ ọrụ siri ike na mgbe ha kwenyechara ịkwụ ụgwọ ha, ha ga-ezitere m ngwaahịa a; n'agbanyeghị na ibe ahụ yiri ezigbo, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ ụzọ m ga-esi akwụ ụgwọ, ị nwere ike inyere m aka .
Zaghachi Miguel Angel Lozano Baron
David zapata dijo
Zaghachi David Zapata
Kedu ka ụlọ ọrụ ahụ dị?
Gini mere ihe eji eme ihe di nkpa maka ebe ahia?
DHL na-ezube ịgbasa iru ya na ecommerce